QiangAn - चीन उच्च गुणस्तर डिस्पोजेबल दही झुण्डिएको पुआल निर्माता र कारखाना
वातावरणीय गर्मी प्रतिरोधी टेबलवेयर र Biopbs पूर्ण रूपमा गिरावट योग्य
खाद्य ग्रेड चाकू
खाद्य ग्रेड कांटा
खाद्य ग्रेड चम्मच
खाद्य ग्रेड र माइक्रोवेव कटोरा द्वारा तातो गर्न सकिन्छ
खाद्य ग्रेड डिश
खाद्य ग्रेड प्लेट
खाद्य ग्रेड र माइक्रोवेव बक्स द्वारा तातो गर्न सकिन्छ
पारिस्थितिक खाद्य ग्रेड प्लास्टिक प्याकेजि Sing्ग एकल स्ट्रॉ
पारिस्थितिक खाद्य ग्रेड कागज एकल भूसे
खाद्य ग्रेड कप ढक्कन
घर > उत्पादनहरु > वातावरणीय गर्मी प्रतिरोधी टेबलवेयर र Biopbs पूर्ण रूपमा गिरावट योग्य > पारिस्थितिक खाद्य ग्रेड कागज एकल भूसे > डिस्पोजेबल दही बेल्ट स्ट्रॉ
डिस्पोजेबल दुध झुन्डिएको भुइँ
डिस्पोजेबल बच्चाहरु को दुध झुण्डिएको
बाँस फाइबर डिस्पोजेबल खट्टा दुध झुण्डिएको
बाँस फाइबर डिस्पोजेबल चिया पेय झुण्डिएको
डिस्पोजेबल Smoothie तीव्र स्ट्रॉ
डिस्पोजेबल दही बेल्ट स्ट्रॉ
डिस्पोजेबल उत्पादनहरु लाई सुविधाजनक र जनता को जीवन मा कुशल को एक धेरै ल्याएको छ, र यहाँ सम्म कि मानिसहरुको जीवन मा आवश्यक उत्पादनहरु बन्न। के तपाइँ पनी चिन्ता गर्नुहुन्छ कि ती डिस्पोजेबल उत्पादनहरु प्राकृतिक, पर्यावरण मैत्री, सुरक्षित, स्वस्थ, सफा र स्वच्छ हो जब तपाइँ उनीहरु लाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी यो प्रश्न को लागी मात्र सही छौं। हाम्रो कम्पनी आयातित कच्चा माल BIO PBS बाट बनेको डिस्पोजेबल दही झुण्डिएको स्ट्रॉ, पुरा तरिकाले अपमानजनक सामाग्री। वातावरण संरक्षण हामी सबैको बाध्यता हो।
डिस्पोजेबल उत्पादनहरु लाई सुविधाजनक र जनता को जीवन मा कुशल को एक धेरै ल्याएको छ, र यहाँ सम्म कि मानिसहरुको जीवन मा आवश्यक उत्पादनहरु बन्न। के तपाइँ पनी चिन्ता गर्नुहुन्छ कि ती डिस्पोजेबल उत्पादनहरु प्राकृतिक, पर्यावरण मैत्री, सुरक्षित, स्वस्थ, सफा र स्वच्छ हो जब तपाइँ उनीहरु लाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी यो प्रश्न को लागी मात्र सही छौं।
हाम्रो कम्पनी आयातित कच्चा माल BIO PBS बाट बनेको डिस्पोजेबल दही झुण्डिएको स्ट्रॉ, पुरा तरिकाले अपमानजनक सामाग्री। वातावरण संरक्षण हामी सबैको बाध्यता हो।
यो डिस्पोजेबल दही झुण्डिएको स्ट्रॉ आयातित कच्चा माल BIO PBS बाट बनेको छ जुन पुरा तरिकाले गिरावट योग्य सामग्री हो।
BIO PBS सामग्री को तापमान -20 देखि 90 डिग्री सम्म पुग्न सक्छ।
डिस्पोजेबल दही तुला स्ट्रॉ प्राकृतिक, पर्यावरण मैत्री, बहुमुखी र लागत प्रभावी छ। यो प्लास्टिक, कागज काली र सामान्य पुआल को लागी एक सही विकल्प हो।
उत्पादन मापदण्डहरु: (विनिर्देशों)
बाहिरी व्यास मिमी)
नोट: थोरै त्रुटि संग आकार शुद्ध म्यानुअल मापन, मानक को रूप मा व्यावहारिकता लिनुहोस्।
उत्पादन सुविधाहरु र अनुप्रयोगहरु:
डिस्पोजेबल दही बेन्ट स्ट्रॉस को उपयोग गरे पछि, यो १ environmental० दिन पछि प्राकृतिक वातावरणीय कम्पोस्टिंग सर्तहरु अन्तर्गत बिग्रन सक्छ, जुन कार्बन डाइअक्साइड र पानी मा विघटित हुन सक्छ, र माटो मा गायब हुन सक्छ, प्रदूषण कम गर्न र वातावरण को रक्षा गर्न धेरै मद्दत गर्दछ। यो खानपान, खुद्रा, र घरेलु उपयोग को लागी सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो।
डिस्पोजेबल दही झुण्डिएको स्ट्रॉ विकृत, चिकनी, गैर विषाक्त, कुनै अजीब गन्ध, उच्च तापमान प्रतिरोधी, पर्यावरण मैत्री, सफा, स्वच्छ, बलियो, सुरक्षित र स्वस्थ, र स्पर्श गर्न सहज छैन।
यो सीधै पिउने पानी, सूप, पेय पदार्थ, दूध चिया, दही, रस, दूध, कफी, सोया दूध, र अन्य तातो वा चिसो पेय को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामी उत्पादन, प्याकेजि ,्ग, ढुवानी, आदि को सबै पक्षहरु मा गुणस्तरीय निरीक्षण छ, सुनिश्चित गर्न को लागी कि ग्राहकहरु लाई पठाइएको प्रत्येक उत्पादन योग्य छ।
हाम्रो डिस्पोजेबल दही झुण्डिएको भूसे MA, CNAS, ILAC-MRA चीन मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय पारस्परिक मान्यता परीक्षण र प्रमाणीकरण को खाद्य ग्रेड प्रमाणपत्र पारित गरेको छ।
वितरण, ढुवानी र सेवा:
आकार र डिस्पोजेबल दही तुला strawcan को विशिष्टता अनुकूलित गर्न सकिन्छ, हामी ठूलो मात्रा मा आदेश को लागी प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान गर्दछौं। विशिष्ट वितरण समय अर्डर मात्रा मा आधारित छ।
1. के तपाइँ डिस्पोजेबल दही झुण्डिएको भुइँ नमूना प्रदान गर्नुहुन्छ? निशुल्क वा शुल्क?
हामी हाम्रो अवस्थित उत्पादनहरु को मुक्त नमूनाहरु, र तपाइँको पक्ष द्वारा भुक्तानी शुल्क शुल्क प्रदान गर्न सक्छौं।
2. तपाइँ एक व्यापारिक कम्पनी वा एक निर्माता हो?
हामी निर्माता हौं।
3. यदि OEM स्वीकार्य छ?
हामी OEM र ODM प्रदान गर्न सक्छौं।
हट ट्याग: डिस्पोजेबल दही झुण्डिएको भुइँ, चीन, अनुकूलित, नवीनतम, गुणस्तरीय, उन्नत, किन्नुहोस्, सस्तो, निर्माताहरु, कारखाना, चीन मा बनेको, उद्धरण
डिस्पोजेबल फल को रस झुण्डिएको
बाँस फाइबर डिस्पोजेबल सोयाबीन दुध झुण्डिएको
ठेगाना: NO.523, Hengchangjing रोड, Zhoushi टाउन, Kunshan शहर, Jiangsu प्रांत, चीन
प्रतिलिपि अधिकार © २०२१ Kunshan QiangAn इलेक्ट्रोनिक टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड - खाद्य ग्रेड प्लेट, खाद्य ग्रेड चाकू, खाद्य ग्रेड कांटा - सबै अधिकार सुरक्षित।